Maxaan ka ogaanayaa profile-ka boggeyga si loo xoojiyo SEO-ga?
Ka hor inta wax kasta oo kale, aan ku bilowno aasaaska. Waxaa jira seddex nooc oo ah noocyada ugu muhiimsan ee xiriirka boggaaga boggaga dib u lahaanshaha waa in ay xiiseynayaan marka ay timaado kor u qaadida guud ahaan SEO-gaaga miisaanka. Sidaa darteed, bilowga aad, waa inaad fahamtaa noocyada xiriirinta ee aad ku dari karto boggaaga boggaaga - qaar ka mid ah waxay u shaqeeyaan ujeedada SEO, laakiin inta kale kuma dhicin saameynta qiyaasta ah ee gaadiidkaaga iyo si aad u fiican u raadinta internetka, ugu yaraan si toos ah.
. Laga soo bilaabo hal dhinac, xidhiidhada gudaha waxaa loo baahan yahay si macquul ah oo ah dhismaha goobta dhismo oo wanaagsan oo aan fiicnayn oo kaliya in la isticmaalo kumbuyuutar wanaagsan oo keliya, laakiin waxaa suuragal ah in la helo faa'iido badan oo tayo sare leh oo ay raadinayaan rikoodho raadinta. Dhanka kale, si kastaba ha ahaatee, amar adag oo aasaas u ah laftiisa ayaa laga yaabaa inay tahay hantida madax-bannaan oo bixisa calaamad wanaagsan oo muujinaysa in ay tahay mid u muuqata inay muujinayso dhagaystayaal ballaaran oo raadiye firfircoon. Fiiro gaar ah: Xiriirada gudaha ee laga helo bogga kasta ee boggaga dib ujoogayaasha ah ma laha saameyn dhab ah oo lagu cabbiri karo taraafikada webka, iyo sidoo kale SEO guud ahaan. Waa xeerka ciyaarta - iyo raacitaanka xeerarka waa la abaalmarin karaa, ugu yaraan wakhti marba, waa sax?
Xidhiidhada dibedda - guud ahaan, nooca xiriirkan waxaa loo isticmaalaa ujeedooyinka SEO. Inaad ka mid tahay waxyaabaha ugu caansan ee isha ku haya makiinada raadiyaha waaweyn sida Google laftiisa, iyo sidoo kale Yahoo iyo Bing, xiriirada dibadda waxay ku xirantahay akhristayaasha internetka ama blogka intiisa kale ee adduunka internetka ah Webka. Oo halkan yimaadaa qayb ka mid ah jaangooyooyinka xiriirka ugu muhiimsan (sida PageRank, Author Domain, User Trust, Author Page, iwm. ). Sidaa daraadeed, bog kasta boggaga dib ujoogayaasha ah wuxuu doonayaa in dhammaantood ay helaan dhibcaha ugu badan ee suurtogalka ah - waxay abuuri karaan aragti adag oo ku saabsan makiinadaha raadinta ee website-yada ama blogku uu ku haboon yahay muujinta korka SERPs. Xiriirada tayada waxay ku dhici karaan adduunka
Dhab ahaan, boggaaga boggaaga ama boggaga backlink profile dhab ahaantii xitaa ka muhiimsan oo aad ka fekeri karto. Waxaan ula jeedaa xiriirinta tayo sare leh oo leh dhibco xoog leh ee PageRank iyo Domain Authority micnaheedu waa inaadan kaliya ahayn hay'ad aamin ah oo lagu kalsoon yahay internetka laakiin in boggaaga gaarka ah uu yahay mid gaar ah oo bixiya qiimo aad u badan - in dadka kale oo dhan Webku ma caawin karo laakiin wuxuu u guuraa oo toosiyaa qaybta la qiyaasi karo ee gaadiidkooda - si toos ah boggaaga ama bogaga bogga.
Maxay Samaysaa Backlink Wanaagsan ee SEO
1. Dabeecadda dhabta ah - macneheedu waxa weeye xiriir kasta oo ku yaal profile waa la dhisay si badbaado leh iyo mid jir ahaanba, iyada oo aan ka qayb qaadanin wax mushahar ah oo mushahar ah, si khaas ah.
2. Xaqiijinta daahirka - waxay u taagan tahay awoodda ay u leeyihiin mawduuca muhiimka ah ama wadahadalka mowduucyada si loo keeno kaliya shabakad websaydh ah oo beegsanaya dhinacyada labada dhinac ee heshiiska.
3. Awoodda iyo kalsoonida - waa dabeecad is-sharaxan, iyada oo kasta oo dib-u-celin kasta oo karti leh oo awood u leh inuu u wareejiyo qeyb ka mid ah "juice link". e. , waa inay ka timaadaa meelo cayiman oo si habboon u adeegaya baahida loo qabo isticmaalayaasha nool Source .